5. ချွဲကျပ်တာ အင်္ဂလိပ်လို
7. လေးငါးနှစ်က အကာအကွယ်မဲ့ ဆက်ဆံမိပြီး
8. Protinet ဆိုတဲ့ ပရိုတိန်းအားဆေးကို
9. Ranitidine နဲ့ Vave ဆိုတဲ့ အအန်ပျောက်ဆေးတွေ
Q 1: လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ တခါတရံ ဗိုက်အောင့်နေပါတယ်။ သားအိမ်က အောင့်တာပါ။ ရာသီလာလို့ အောင့်သလိုမျိူး၊ အမြဲတမ်း မဖြစ်ပါ။ ကျွန်မ စိုးရိမ်တာက သားအိမ်မှာ ပြဿနာရှိမှာ စိုးလို့ပါ၊ ကျွန်မအသက် ၂၆ ရှိပါပြီ၊ ခုမှ အိမ်ထောင် ကျခါစပါ။ အပျိုဘဝ မှာလည်း ရာသီလာစဉ် ပထမရက်မှာ မခံမရပ်နိုင်အောင် အောင့်လေ့ရှိပါတယ်။ အခုအောင့်တာရော စိုးရိမ်စရာ ရှိပါသလား၊
• အမျိုးသမီး မွေးလမ်းရောဂါ မဟုတ်တာကို ဖယ်ထုတ်ရပါမယ်။ သားအိမ်အ၀၊ သားအိမ်၊ သားအိမ်ပြွန်မှာ ရောင်ရင်လဲ ဖြစ်တယ်။ အဖြူဆင်းနိုင်တယ်၊ တချို့ယားမယ်။ ဆေးစား-ဆေးထည့်ရင် ပျောက်ပါတယ်။
• ပဌမဆုံး Metronidazole 1 tablet3timesaday for 5-7 days သောက်ပါ။ ဆေးဝယ်လို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆေးက နဲနဲခါးတယ်။ တချို့မှာ ဆေးသောက်နေတုံး အစားပျက်၊ ပျို့ချင်တယ်။ လူတိုင်းမဖြစ်ပါ။ နောက် မရသေးရင် Doxycycline 100 mg two timesaday for 5-7 days သောက်ပါ။ ၂ မျိုးလုံး တွဲသောက်ရင်လဲ ရတယ်။
1. Dyspareunia (1) ဆက်ဆံချိန်မှာ နာကျင်တာ (၁) အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၂၀)၊
Q 3: ကျွန်တော် အလုပ်ပင်ပန်းလို့လား အိပ်ရေးမဝလို့လား အားအင်တွေ ကုန်ခမ်းသလိုခံစားရတယ်။ လိင်စွမ်းအင်တွေလဲ ကျဆင်းသလိုဘဲ။ ဆောင်းပါးတွေလဲ ဖတ်ပါတယ်။ သုတ်လွတ်မြန်တဲ့ ဝေဒနာလဲ ခံစားရတယ်။ ကြာကြာ ထိန်းလို့မရဘူး။ ပြန်မာဖို့ကို အတော်ကြိုးစားယူနေရတယ်။ အသက် ၃ဝ ကျော်အရွယ်ဆိုတော့ ဆေးလဲ မသောက်ချင်သေးဘူး။ သုတ်လွတ် မြန်တာက အရမ်း မြန်တယ်လို့လဲ မဟုတ်ဘူး။ ၄ မိနစ် ငါးမိနစ်လောက်တော့ ရတယ်။ နောက်တစ်ခါ ပြန်ရဖို့ တော်တော် စောင့်ယူရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မမာတော့ဘဲ ပင်ပန်းပြီး အိပ်ပျော်သွားတယ်။ အဲဒါရောဂါတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်တယ်။ စိတ်ကြောင့်များလား။ မိန်းမကိုလဲ ကျေနပ်စေချင်တယ်။
Q 4: ကျွန်မအမေက အခု အသက် ၅၅ နှစ် ရှိပါပြီ။ အနည်းငယ် ၀ပါတယ်။ အမေ့ကို ကျန်းမာရေး သတိထားပြီး စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လ ကစပြီး အမေက အနည်းငယ် ပိန်လာပါတယ်။ နောက်ပြီး ည သန်းခေါင်ကျော် ချိန်မှာလည်း ဗိုက်ဆာတာ၊ ရေငတ်တာ ဖြစ်လို့ ထပြီး စားရပါတယ်။ နောက်ပြီး အိမ်သာတက်ပြီး မနက် အိပ်ရာထလို့ ကြည့်ရင် အိမ်သာကြွေခွက်မှာ ပုရွက်ဆိတ်တွေ တက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါ အမေမှာ ဆီးချိုရောဂါများ ဖြစ်နေသလားလို့ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဆီးချိုလက္ခဏာ၊ သတိထားရမည့် အချက်၊ နေထိုင်ပုံတွေကို ဘယ်လို နေထိုင်ရမယ် ဆိုတာ၊ နောက်ပြီး ဆေးခန်းပြလို့ ဆေးစစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ဆရာဝန်၊ ဘယ်လိုပြောပြပြီး ဆေးစစ် ခံယူသင့်ပါသလဲ။
"Diabetes ဆီးချို" ကို ဖတ်ပါ။
Q 5: ချွဲကျပ်တာ အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
Just to say tightness of chest or he/she can't breathe properly or say I doubt something is obstructing in his/her chest. Dyspnea is medical term. A patient can also complain of difficult breathing.
Q 6: အခုခေတ်စားနေတဲ့ ရင်သားအလှပြုပြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း သိချင်ပါတယ်။ နေတာက (့) နိုင်ငံမှာပါ။ သူငယ်ချင်း အမျိုးသမီးကတော့ ခွဲစိတ်စရာမလိုပဲ ဆေးထိုးလို့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုး ရှိမရှိနဲ့ ထိုးဆေး၊ သောက်ဆေး လိမ်းဆေးတွေ အမျိုးမျိူးထဲက ဘယ်ဟာက ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ တချို့ကလဲ လိမ်းဆေးက အမြဲမသုံးရင် နဂိုရှိရင်းထက် ပိုရုပ်ဆိုးတယ်တဲ့။ TV မှာလဲ ကြော်ငြာတွေက အမျိုးမျိုးပဲ။ ဒီမှာလဲ တော်တော်ကို ခေတ်စားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘလော့ တင်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ လှချင်ပေမယ့် သေချာ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုး အစရှိတာတွေ မသိပဲ အရမ်း မလုပ်ရဲဘူး။ ကိုယ့်လိုပဲ သိချင်သူတွေ ရှိမယ်လို့လဲ ထင်ပါတယ်။
Q 7: ကျွန်တော် အသက်(၃၂)နှစ်ပါ။ လိင်ဆက်ဆံတာများ တစ်ညမှာ နှစ်ကြိမ်လောက် ဆက်သွားရင် လိင်တံက ယားသလိုလို နာသလိုလိုနဲ့ အနီစက်တွေ အဖုသေးတွေ ထိပ်ဖျားရဲ့ အောက်ခြေနားမှာ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ရေများ ထိလိုက်ရင် အရမ်းနာပါတယ်။ ဆီးသွားလျင် ဆီးဝါခြင်း၊ ဆီးကျန်ခြင်းများလက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်ရောက်လျှင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို မလုပ်တော့ဘဲ သုံးလေးရက် နားလိုက်လျှင် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီး အနာရော အနီစက်များပါ ပျောက်သွားပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် လေးငါးနှစ်က အကာအကွယ်မဲ့ ဆက်ဆံမိပြီး သူမ၏ အင်္ဂါတွင် မထင်မှတ်ဘဲ ကာလသားရောဂါ လက္ခဏာကို စတွေ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အသိ နောက်ကျသွားခဲ့ပါသည်။ ရောဂါကူးပြီး ယားယံရာက စတင်ပြီး အသေချာကြည့်သောအခါ ခေါင်းကြီးပြီး ဆေးခန်းကိုသွားပြပါသည်။ ဆရာဝန်က လိမ်းဆေးပေးပြီး ပြီးသွားပါတယ်။ နှစ်စဉ် ဆေးစစ်ကြတဲ့ ဆေးရုံက သွေးယူးပြီး စစ်တဲ့ရောဂါတွေမှာ ဆစ်ဖလစ်ရယ်၊ ဆင်ခြေထောက်ရယ်၊ အဓိကစစ်ကြောင်း၊ ဘာမှ သတိပေးမခံရဘဲ pass ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆို အမျိုးသမီးက ကိုယ်ဝန်ရပြီလို့ ဆိုလာပါတယ်။ ကျွန်တော် စိတ်ပူရပါတယ်။ ဘာရောဂါ၊ ဘယ်အဆင့်လဲ။ အနီစက်တွေ ပေါ်နေချိန်တွင် အမျိုးသမီးကို ကူးပါသလား။ ကလေးပေါ် ကူးစက်ပါသလား။ ဘယ်လိုထိ သက်ရောက်မှု ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။
လိင်ကတဆင့်ရောဂါပိုး တယောက်ယောက်မှာ ရှိနေရင် သုတ်ရည် မထည့်လဲ (ကွန်ဒွမ်) မပါရင် ကူးနိုင်ပါတယ်။
Q 8: အားဆေးတွေ စားတဲ့အခါ တစ်ရက်က မနက်စားလိုက်၊ နောက်တစ်ရက်က ညနေစားလိုက် အဲတာဟာ ဆေး အာနိသင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလား။ နောက်ပြီး Protinet ဆိုတဲ့ ပရိုတိန်းအားဆေးကို နေ့တစ်နေ့ရဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ သောက်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးပါလဲ ခင်ဗျား။
အားဆေးတွေ စားတဲ့အခါ တစ်ရက်က မနက်စားလိုက်၊ နောက်တစ်ရက်က ညနေစားလိုက် အဲတာဟာ ဆေးအာနိသင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလား။
Q 9: ၂ဝဝ၇ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်က Pylo kit တပတ်သောက်ဆေးကို ၃ ရက်စာလောက်ပဲ သောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါသောက်ပြီး အန်လို့ ဆက်မသောက်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ၂ဝဝ၈ ခု ၁၁ လ ပိုင်း လောက်က Ranitidine နဲ့ Vave ဆိုတဲ့ အအန်ပျောက်ဆေးတွေ သောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ခု ၅ လပိုင်း ခွင့်ပြန်တုန်းက ဆေးခန်းပြခဲ့ပါတယ်။ အဲတုန်းကလည်း Polyamine, Nuri gramler, Ranitidine, Vave ဆေးတွေ သောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။